EX - ABSDF: March 2013
စစ်ဆင်ရေးပြီး စစ်ဆင်ရေးမှ ( အပိုင်း-၁၀၂ )
''မန်းခွား'' ရောက်လာပြီးကဲ ''မန်းခွား'' ဒီဓာတ်ပုံထဲက အလောင်းက သခင် တင်ထွန်းလို့ ဘာကြောင့် မင်းပြောနိုင် ရသ လဲလို့ မေးတော့ ကျွန်တော် ပအို့ဝ်တာကလယ် အဖွဲ့က တစ်ဖက် နိုင်ငံမှာ စစ်ပညာသင်ပြီး ပြန်လာသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ချမှတ်ခဲ့သော တပ်မတော်သား ကျင့်ဝတ်
Seaman Nayminthu (Notes) on Saturday, March 30, 2013 at 7:00am
(ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် စစ်သေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ သောကြာနေ့တွင် ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများ လိုက်နာကျင့်ကြံရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်း လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်)
စိတ်ဧ။်နား ခိုရာ and Sa Maung shared Zaw Win's photo.
စာရေးဆရာ၏မှတ်စု (စင်္ကာပူ ၂၀၀၉) (ဂျူး)
ဘ၀နှင့်စာပေ (မော်လမြိုင်) (ဂျူး)
http://www.mediafire.com/download.php?z6g884ilhlaislxစာရေးဆရာတစ်ယောက်၏ မှတ်စုများ (မြင်းခြံ) (ဂျူး)http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhpကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ (တောင်ငူ) (ဂျူး)http://www.mediafire.com/download.php?dvkap33dbbsqoajအနုပညာဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာ ခံစားသူ (စင်္ကာပူ) (ချစ်ဦးညို)
Seaman Nayminthu and Ei Mon Mon Oo shared ဗဟုသုတ စွယ်စုံကျမ်း'sphoto.
၁။စ၀်ရွှေသိုက်(၁၈၉၆-၁၉၆၂)ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဆုံး သမ္မတ အဖြစ် လူသိများလေသည်။ သမ္မတတာဝန်ကို (၄.၁.၁၉၄၈)မှ (၁၆.၃.၁၉၅၂)ထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။စ၀်ရွှေသိုက်ကို ၁၈၉၆ခု အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက် သောကြာနေ့ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေမြို့ အဖ စ၀်ချုံ၊အမိ ဒေါ်စ၀်နန်းဆာတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ငယ်အမည်မှာ စပ်ရွှေဆိုက် ဖြစ်ကာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်လေသည်။
နိုက်ကလပ်နဲ့ တူနေတဲ့ ကျွန်မတို့ ချစ်စရာ ရိုးရာ သင်္ကြန်လေးကို မူလအတိုင်း ပြန်လည်ရုပ်လုံးဖော်နိုင်ကြပါစေ ။
♫ ♫ ♫ ယိမ်းနွဲ့ကာ တီးကွက်နဲ့အတူ ကမယ် လက်ခုပ်သံစည်းချက်လိုက်မှာလား
ညီညီညာညာညှင်းသွဲ့သွဲ့ လေပြေမှာ ယိမ်းနွဲ့ကာ စိုပြည်တဲ့ ပိတောက်တို့ပွင့်စေမယ် ......♪ ♪ ♪ အွန်လိုင်းရေဒီယိုဆီက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တေးသံလေး ။ အတာကူးတဲ့ တန်ခူးချိန်ခါ သမယ ရောက်ဖို့ နီးကပ်လာပြီလို့ အသိပေးလိုက်သလိုပဲ ။ ရင်ထဲကို ချက်ချင်းတိုးဝင်လာတာက လွမ်းဆွတ် တမ်းတခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားမှု ။
ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းတွင် အာဏာပိုင်များက ကူညီရေးအဖွဲ့ကို တားဆီး၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကို မဟန့်တား (ရုပ်/သံ)
ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးနေသူ ကိုရဲမင်းဦးအား ရဲက စစ်မေးနေခြင်းဖြစ်ဟု ၈၈ ပြော
ရန်ကုန်တက္ကစီများ မီတာစနစ်ဖြင့် ပြေးဆွဲရေး စတင်လုပ်ဆောင်
တစ်လလျှင် Sim Card (၃၅ဝဝဝဝ)နှုန်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဖြူးပေးမည်
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ (ရုပ်/သံ)
မင်းလှအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို သံဃာတော်များက ဆွေမျိုးများထံ ကူညီပို့ဆောင်
တောင်ကြီးမြို့ ဓာတ်ဆီဆိုင်တခုတွင် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဧပြီ ၁၂ တွင် ဂျပန်သွားမည်
မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal (VOL.4, NO.50)
မတ်လ(၂၈)ရက်နေ့ ထုတ် Popular News Journal အတွဲ ၅ ၊ အမှတ် ၁၃
မတ်လ(၂၈)ရက်နေ့ ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်အတွဲ(၉)အမှတ်(၁၃)
မတ်လ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် Flower News Journal အတွဲ ၉ အမှတ် ၁၃
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်သောင်း တိုးမြှင့်ခန့်မည်
ပဋိပက္ခများနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပရောဂ
ဓါတ်ပုံအား burmese.voanews.com မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။ by မှူး သစ် (Notes) on Monday, March 25, 2013 at 12:19pm
လူမျိုးရေးဘာသာရေးကို အခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သော မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းများဧ။် နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့မှာပါ မတည်မငြိမ် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းနေစဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြီးစွာသော အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ကောင်းသော အန္တရယ်ဟုလည်း ယူဆ နိုင်သည်။။
လတ်တလော ဆူပူမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိန့်ခွန်း
တရုတ်အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန်က မွေးထုတ်ပေးနေသလား ?
အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးစနစ်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါး လူနေမှုစနစ်တခုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ တွင်တွင်ဝါဒဖြန့်နေပေမဲ့ တရုတ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေ မြေးတွေက အမေရိကန်ရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာသင်ယူနေကြတဲ့အတွက် အပြောနဲ့အလုပ် မညီတဲ့အကြောင်း ၀ါရှင်တန်ပိုစ် သတင်းစာမှာ အင်ဒရူးဟီဂင်နဲ့ မိုရင်းဖန်ဆို့က ဆောင်းပါးရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Read more »
မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့။
ပြည်လုံးကျွတ် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးကို စတင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့နေ့။
ဒီနေ့ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက တပ်မတော်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို သမိုင်းနောက်ခံကားချပ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်လေ့လာခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ခင်ကာလက တပ်မတော်နေ့အဖြစ်သာ သတ်မှတ်လက်ခံထားခဲ့ပါတယ်။ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့၊ တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ကဗျာပြိုင်ပွဲ၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ စတာတွေမှာလဲ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသူအနေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နတ်တလင်းမြို့နယ်တွင် ကောလဟာလများကြောင့် ရဲနှင့်တပ်တို့ ရွှေ့လျား လုံခြုံရေးယူနေရ
by Aung Myanmar (Notes) on Tuesday, March 26, 2013 at 6:42pm
မတ်လ၊ ၂၇ ၊ ၂၀၁၃
ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်တိုင်းပြည်၊ မည်သည့်လူမျိ်ုး၊ မည်သည့်ဘာသာမဆို အေးချမ်းစွာနေထိုင် ပြီး ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးကို ရှာဖွေ စားသောက်ကာ နေထိုင်သော လူကောင်းများရှိသကဲ့သို့ ပြစ်မှုများကို ကျူးလွန်သော လူဆိုးသူခိုးများလည်း ရှိပါသည်။ထိုလူဆိုး သူခိုး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ များကို သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းပြုလုပ်ရပါသည်။
မိတ္ထိလာမှာ အဓိက သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်သူ ဦးဝင်းထိန်ကို တွေ့ ပြီ
ကွန်ဆူး မား and Thiha Soe shared Black Angle's photo.
မိတ္တိလာမြို့ မှာ ရွှေဆိုင်ကနေပြီး အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ကြမှာ ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး ဖြစ်ခဲ့ ကြတယ် ။ အဲဒီနောက် ရိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ တယ် ။ ဒီသတင်းကနေပြီး ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးခဲ့ တဲ့အဓိကရုဏ်းမှာ ရဟန်းသင်္ဃာတော်တပါးကို အက်စစ်တွေလောင်း မီးရို့ သတ်ဖြတ်မှုအပြီး နေအိမ်တွေ မီးလောင်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ ကြရတယ် ။ မိတ္ထိလာသား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သူ လူမျိုးတွေ ဖြစ်ရပ်ကို ဂျာနယ်တွေမှာ ဖေါ်ပြရေးသားနေကြပါတယ် ။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု ( ၂၆-၃)
မြို.နယ်တစ်ချို.တွင် ပုဒ်မ ၁၈၈ထုတ်ပြန်
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်မှုများကို အစွမ်းကုန် တားဆီးကိုင်တွယ်သွားမည်
အိုးသည်ကုန်း မြို့မှာ ဆူပူ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား
ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ကောလဟာလများကြောင့် လူများစိတ်နှောင့် အယှက်ဖြစ်နေ
ကောလာဟလများကို မယုံရန် တာဝန်ရှိသူများ ပြောကြား
အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပြည်သူများ ထိတ်လန့်
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောသတင်းများမဟုတ်မှန် ရန်ကုန်မြို့တွင် ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုတ်ပြန်
နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်က တည်ရှိခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ထပ်မံ တူးဖေါ်တွေ့ရှိ
၁၂၄ အထူး ယာဉ်အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရပ်ထားသည့် ယာဉ်များကိုဝင်တိုက်
ခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ မပျော်ကြဘူးလား? ဘာကြောင့်လဲ?
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု သဘောတရားအခြေခံမိတ်ဆက် ( ၃ )
by Aung Zaw Bo (Notes) on Sunday, March 24, 2013 at 2:53pm
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ သမိုင်းနောက်ခံ
လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာစုပေါင်းများစွာကပင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရမှုများအတွက် ပြန်လည်၍ အသိအမှတ်ပြု ကုစားပေးခဲ့ကြပုံကို လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်။ အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပက်သက်၍ ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြု ကုစားသော ယနေ့ခေတ်ကာလ၏ ဆောင်ရွက်မှုများသည် လူအများအစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ခံခဲ့ရသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ ဟိုလိုကော့စ်အပြီးမှ စ၍ကျင့်သုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ထိုသို့ အစုအပြုံလိုက် လူအများ အသတ်ခံခဲ့ရ၊ ညှင်းပန်းခံခဲ့ရသော ဟိုလိုကော့စ်အခြေအနေမှ အသတ်ခံခဲ့ရသူ ကာယကံရှင်များ ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကံကောင်းထောက်မ၍ ဆက်လက်ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခဲ့သူများအတွက်လည်းကောင်း မည်ကဲ့သို့ အကူအညီများပေးသင့်သည်ကို ထိုအချိန်က ခေါင်းဆောင်များ လူထုအများစဉ်းစားခဲ့ကြပါသည်။ Read more »
'အမေစု' ဟုချစ်စနိုးခေါ်သော အသက် ၆၀ ကျော် အအိုဖော်ဝင်စ အဘွားအို ငယ်ငယ်နှင့် 'အဘပြောင်' ဟုချစ် စနိုးခေါ်ကြသော အဘိုးအိုငယ်တို့ လက်တွဲမောင်းနှင်သော ဒီမိုကရေစီ ကားအိုသည် တရွေ့ရွေ့ခရီးနှင်လျက်ရှိသည်။
အကြမ်းဖက်သူတွေကို ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူသွားမည် မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်း လူပေါင်း ၂ သောင်းကျော်အိုးအိမ်မဲ့ မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ မြန်မာကိုင်တွယ်ပုံ အမေရိကန်ထောက်ခံ
ဆောင်းပါးရှင် (မြန်ဂုဏ်ဆောင်)လောက လူ့အသိုင်း အဝိုင်းကို အလှဆင် ကြမည့် ယနေ့ လူငယ်များသည် ပညာရေး၌ ထူးချွန် ပြောင်မြောက် ကြပါပေသည်။ လူချွန်လူကောင်း ကလေးများကို မြင်တွေ့ရတိုင်း အနာဂတ် အတွက် အားတက် မိပါသည်။လက်ခုပ် အခါခါ တီးမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခေတ်အခါ ကထက် ပိုမို ထူးချွန်သော အနေအထား ဖြစ်၍ လိုလိုလားလား လက်ခံကြိုဆို ရသည်။သို့သော်ယနေ့ လူငယ် အချို့သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ် ပိုင်း၌ နိမ့်ကျ နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လူ့အဖွဲ့ အစည်းတွင် လူတိုင်း အရေးမူ အလေးထား အပ်သော လောကနီတိ တရား၊ ကိုယ်ကျင့် တရားများ ၌ လျော့နည်းလျော့ရဲ ဖြစ်နေကြသည်။ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်သိမှု၌ ဟာကွက် ဖြစ်နေကြသည်။ ဤသည်မှာ အနာဂတ် လူ့ဘောင် အဖွဲ့ အစည်းအတွက် လိုအပ်သော အသွင်ရပ်တည် မှုကား မဟုတ် ပါချေ။လူငယ်တို့၏ သိစိတ်၌ ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းကို ဟန်ချက်ညီညီ သိလာ မြင်လာအောင် လုပ်ဆောင် ရမည်မှာ ပြုစု ပျိုးထောင်လျက် ရှိကြသော အုပ်ချုပ်သူ ဆရာမိဘ အုပ်ထိန်းသူ တို့ဘက်၌ လုံးဝရပ်တည် နေပေသည်။
Lu Cifer and2other friends shared Zaw Ye's photo.
တို လူသားဆန်ဆန် တွေူးတတ်ကြပါလေ ( သည်မြေသည်ရေမှာ အတူမှီတင်း နေထိုင်ကြသည့် လူအချင်းချင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအရ မခွဲခြားသည့် သူတို့လို
လူမျိုး တွေလည်း ရှိသေးကြောင်း ဂျမားအဖိုးကို ပြောပြလိုသည့် ဆန္ဒက နီတွတ်ရင်ထဲမှာ တဖွားဖွား။ Read more »
“၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ”
Seaman Nayminthu and2other friends shared Myawady News's photo.
ကိုမင်းကိုနိုင်ဆီကို ခင်မင်မှု အရင်းခံပြီး စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဆီကို စာရေး မယ်လို့ ကြံရွယ်နေခဲ့တာ အခုမှပဲ အထမြောက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နာမည်ကိုတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်က ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုပဲ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား
တစ်ဦးပါပဲ။ Read more »
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ချမှတ်ခဲ့သော တပ်မတော်သား ကျင့်...
နိုက်ကလပ်နဲ့ တူနေတဲ့ ကျွန်မတို့ ချစ်စရာ ရိုးရာ သကြ...
တရုတ်အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန်က မွေးထုတ်ပေး...
မိတ္ထိလာမှာ အဓိက သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်သူ ဦးဝင်းထိန်ကို...
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု သဘောတရားအေ...
ယနေ့ ဆင်းရဲသား ပြည်သူတို့၏ အသံ
နွားနှင့်သပိတ် (ယနေ့ခေတ်ကျောင်းသားလူငယ်တိုင်း ဗဟုသ...
မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က နိုင်ငံခြားငွေ လက်မှတ်...
ဦးပိုင်ကို လူထုပိုင်ကုမ္မဏီအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်...
ပထဝီ နိုင်ငံရေးတွင် အရေးပါသော မြန်မာ
ဗကသ၏ လက်ပံတောင်းဒေသဆိုင်ရာ သဘောထားကြေညာချက်
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ ၈၈မျိုးဆက်တို့ သဘောထားထု...
အတိုက်အခံအကွဲနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ် (မောင်ဝံသ)
( ၉ ) နှစ်သားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးက ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်း...
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ
The Choice (myanmar substitle)
မြန်မာပြည်က ခေတ်သစ် ကျေးညီနောင်ပုံပြင်
စာဖတ်ရင်းငြိမ်သက်နေရာကနေ သတင်းတွေဖတ်မိတဲ့အခါမှာ မေ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (16-3)
- လက်ပံတောင်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲမှု နောက်ကွယ်မှစီစဥ...
လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာက ပြောသော စကား
"အထွေထွေ မကျေနပ်ချက်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်...
ဒေသခံတို့ နှင့် တိုက်ပွဲဝင်သူများ သို့ အကြံပြုချက်...
မော် နဲ့ တိန့်
အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (Civil Society) - ၁
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပံတောင်းခရီး ဆန္ဒပြမှုနှင့် ကြ...
အရာရာ နောက်ကျနေခဲ့ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရား တစ်ခု ......
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လယ်ယာမြေ ပေါ်လစီ"
သတိ…. ဤနေရာ ပိုင်ရှင်ရှိသည်
တံတားဖြူကနေ တံတားနီဖြစ်သွားတဲ့ သမ်ိုင်းကြောင်း
ကားလ်မာ့က်စ် မိတ်ဆက် (ဘာသာပြန်) အခန်း (၄)
ဒီမိုကရေစီရှိ “ပြည်သူလူထု” (“The People” inaDemo...
လူငယ်နှင့် ဒီမိုကရေစီ နား၊ မျက်စိနဲ့ ပါးစပ်တွေကို ...
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကျောင်းပညာပေး သင်ခန...
တိုးတက်ချင်သလား၊ မိမိလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ရိုသေပါလေးစာ...
ကိုလိုနီခေတ် တိုင်းရင်းသားမျာအခြေအနေ (၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၄-၃)
ကိုလိုနီခေတ် တိုင်းရင်းသားများ အခြေအနေ (၁)
ရွဲ့ ကြောက်ပြတဲ့ အကြောက်တု နောက်ကွယ်က အတွင်းသား
စိုင်းနော်ခမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်သာဆိုလျှင်......
( တောင်သူလယ်သမားနေ့ အမှတ်တရ ) အစိုးရနှင့် တာဝန်ရှိ...